ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 15 အကောင်းဆုံးက Twitter အကောင့်တွင်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များအတွက် Follow မှ 2015
15 အကောင်းဆုံးက Twitter အကောင့်တွင်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များအတွက် Follow မှ 2015
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 21 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဒစ်ဂျယ်တယ်မောင်းနှင်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်, ကျွန်တော် internet ကိုမှကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်အများစုကိုရှာဖွေခြင်းအားကိုးအားထားပြု. လူအတော်များများမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူထိတွေ့ထားဖို့အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုနေဖြင့်လက်ရှိကမ္ဘာ့အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် updated မှ, သို့သော်အဘယ်သောဆက်ဆံရေးကိုအကြံဉာဏ်ရတဲ့အကြောင်း?
Twitter အသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး 140 သူတို့၏နောက်လိုက်နှင့်အတူအက္ခရာများသို့မဟုတ်လျော့နည်း. လူအတော်များများသည်မိမိတို့အလုပ်အားသာက link တစ်ခုထွက်ပေါက်အဖြစ် Twitter ကိုသုံးစွဲဖို့ပေမယ်စိတ်ဝင်စားနေသောသူတို့အား၎င်းအကြံဉာဏ်တွေပေးဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်တက်ပြီးပါပြီ.
ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကစာရေးဆရာတစ်ဦး plethora ရှိပါတယ်, ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်ထုတ် dishing ၏နည်းလမ်းအဖြစ် Twitter ကိုအသုံးချပြီးဘလော့ဂါများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများက. ကျွန်မချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကအကြံဉာဏ်ကိုလှည့်ပတ် revolve တချို့ကိုကြီးမြတ် Twitter အကောင့်တစ်ခုစာရင်းပြုစုထားသော. သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ကိုတိုးတက်စေရန်မည်ကဲ့သို့အပေါ်အကြံပေးချက်များကိုရှာဖွေနေပါသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ပြိုကွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုအပေါ်အကြံဉာဏ်တောင်းသင့်သလားဆိုတာ, အဲဒီ Twitter အကောင့်သင်ဖုံးလွှမ်းတယ်ပါပြီ!
ဒါကြောင့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ဒီနေရာမှတစ်ခုစာရင်းဖြစ်ပါတယ် (ငါ့နှိမ့်ချအမြင်မှာတော့) ထို 15 သင်ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်ရှာလျှင်နောက်တော်လိုက်ရန်အကောင်းဆုံး Twitter အကောင့်:
Shannon မကြာသေးမီကချိန်းတွေ့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလှည့်ပတ်ဆုံလည်စာအုပ်ထုတ်ဝေကြောင်းကို၎င်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ကမ္ဘာရိုက်ထည့်ရန်မည်ကဲ့သို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်နည်းပညာများကိုတက်ကမ်းလှမ်းသောသူစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကစာရေးဆရာဖြစ်. အကြံဥာဏ်ဆောင်းပါးနှင့်မဟာဗျူဟာများနှင့်ချိန်းတွေ့အတွက်သူမ၏ Twitter ကိုအစာကျွေးကြည့်လိုက်ပါ.
ဂျူလီ Spira (JulieSpira)
ဂျူလီအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်ရေကြောင်းလမ်းညွှန်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးမကြာခဏသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးလမျးညှနျမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်းပါးများနှင့်ဗွီဒီယိုများလင့်ခ် posts. သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူခြင်း၌စိတ်ဝင်စားကြလျှင်သူမ၏ Twitter ကိုအစာကျွေး Follow.
ရှိမုန်ကို Katerine (@by_simone)
ရှိမုန်လိင်ဖြစ်ပါသည် & ထိုမိန်းမအားပေးတော်မူမည်သည့်လူအပေါင်းတို့နှင့်အကြောင်းအရာအသစ်များ tackles ဘယ်သူကြားဆက်ဆံရေးဘလော့ဂါ. သင်သတ္တိရှိရှိအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မှ Sexy ဖြစ်ခံကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်သို့အထိအကြောင်းအရာအသစ်များဆြေးြေိံးသူတစ်ဦးစာရေးဆရာကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဆီလျော်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကို links တွေကိုသူမရဲ့ Twitter ကိုအစာကျွေးထွက်ကိုစစ်ဆေးသေချာအောင်.
အာရုန်သည် Horton ကနှင့် Josh Nalven; Guy နှင့်သူငယ်ချင်းများ Podcast (@TheGuyFriends)
အာရုန်သည်နှင့် Josh ချိန်းတွေ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက် Podcast တခုကိုလက်ခံကျင်းပသူနှစ်ဦးအဆွေဖြစ်ကြ၏, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်အကြံဥာဏ်. ကသောအကြောင်းအရာများမှကြွလာသောအခါထိုသူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုရှိပါသည်, အဘယ်အရာကိုမျှကန့်သတ်ပိတ်. သင်နှစ်ခုရယ်စရာနှင့်လုံးဝရိုးသားယောက်ျားတွေမှချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်များကိုနားထောင်ခြင်းငှါယားနာနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Twitter ပေါ်မှာသူတို့ကိုမျှော်ကြည့်ရှု.
ရုံ Kirsch (jen_kirsch)
Jen စဉ်-ရှုတ်ထွေးစေချိန်းတွေ့လောကအကြောင်းပိုသင်ယူဖို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောသူတို့အဘို့ကိုအကြံဉာဏ်တက်ကမ်းလှမ်းသူတစ်ဦးနှင့်စာရေးဆရာကြားဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်. သူမသည်ခရီးဝေးဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်တူဘာသာရပ်များကိုဆြေးြေိံးထားသည်, ပြိုကွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပထမဦးဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပုံကို, များစွာသောအခြားခေါင်းစဉ်တို့တွင်အ. သူမ၏ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကဆောင်းပါးတွေ links တွေကိုအပြင်အချို့သောမြန်ဆန်သည့်အကြံပြုချက်များကိုရှာဖွေရန်သူမ၏ Twitter ကိုအစာကျွေးခြင်းမှတဆင့်ဆင်းပြီး.
ဧပြီလ Braswell (@AprilBraswell)
ဧပြီလကျော်အမျိုးသမီးများအတွက်ချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်ထုတ် dishing ကိုအထူးပြုနေသူတစ်ဦးချိန်းတွေ့နည်းပြဖြစ် 40. သူမ၏ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကဆောင်းပါးတွေကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ, သူမ၏ Twitter ကိုအစာကျွေးခြင်းတူလောက်, သင်ရင့်ကျက်မိန်းမတို့အဘို့ချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်ရှာလျှင်သူမ၏ဒါကြောင့်ထွက်စစ်ဆေး.
Christan ကော်လံကရေးသားခဲ့သည်နှင့်သင်လူပျိုင်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာင်သူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်. သူမသည်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှအံ့သြဖွယ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမှသည်အကြောင်းအရာအသစ်များဆြေးြေိံး. သူမလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်းတွေ့မေးခွန်းများကိုတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သူမ၏နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်သူမ၏ Twitter ကိုနောက်လိုက်နောက်ပါအားပေးပါတယ်. သင်မီးလောင်ချိန်းတွေ့မေးခွန်းရှိပါကငါပြန်ပြော၏ချင်တယ်, သူမ၏ Twitter ကိုအစာကျွေးထုတ်စစ်ဆေး.
Catalog Thought (@ThoughtCatalog)
Catalog ချိန်းတွေ့တဲ့အစုအဝေးကိုတက်ကမ်းလှမ်း Thought, သူတို့ website ကနေအများအပြားကွဲပြားခြားနား Contributors ကရေးသားသောဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်အကြံဥာဏ်ဆောင်းပါးတွေ. သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအမြဲရယ်စရာအနည်းငယ် racy များမှာ, ထို့ကြောင့်ဤ website (နှင့် Twitter feed ကို) တစ်ဦးရက်စက်စွာရိုးသားချဉ်းကပ်မှုသဘောပေါက်နားလည်သောသူတို့အဘို့အသည်စုံလင်သည်.
ယောရှုသည် Pompey (JoshuaPompey)
ယောရှုသည်ကျွမ်းကျင်မှုသူ၏ဒေသနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ပေါင်းများစွာမြောက်မြားစွာဆောင်းပါးတွေကိုရေးစပ်ခဲ့သူတစ်ဦးချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်. သူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ဧရိယာမှာလိုလားသူဖြစ်သည် ကစ., သူသည်သင်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ကိုပြည့်စုံမှထိပ်တန်းအရည်အသွေးအီးမေးလ်ထွင်းထုကိုဘယ်လိုတူသည့်အကြောင်းအရာများကိုဆြေးြေိံးထားသည်. Josh သည်မကြာခဏဆီလျော်တဲ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်ကို update, ဒါကြောင့်သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအကြံပေးချက်များရှာလျှင်မိမိအ feed ကိုထွက်ကိုစစ်ဆေးသေချာအောင်.
YourTango စာရေးဆရာများသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့ကထွင်းထုခ​​ျိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကအကြံဉာဏ်များဆောင်းပါးတွေကိုများစွာသောရှိကြောင်းအခြား website ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုချိန်းတွေ့ဘုံအကြောင်းကိုနေရောင်အောက်၌ရှိသမျှတို့ကိုအဖုံးကို, ဒါကြောင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမှဆွေးနွေးကြောင်းဆောင်းပါးနှင့်အရာရာကိုရှာဖွေရန်၎င်းတို့၏ Twitter ကိုအစာကျွေးထုတ်စစ်ဆေး.
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များပေါများနှစ်ဦးစလုံးလိင်မှစက်ချုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြံဉာဏ်ပေးလူအများစုကြုံတွေ့ကြရသည်အမျိုးမျိုးသောချိန်းတွေ့ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်, သင်ချိန်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားကလူကိုဆွဲဆောင်ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လောက်မှသင်တို့အဘို့အမှန်သည်ဆိုပါကပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံတူ. သူမ၏ဆောင်းပါးတွေနဲ့ရံဖန်ရံခါကြားဆက်ဆံရေး quip links တွေကိုအဘို့အ Twitter ပေါ်မှာသူမ၏ Follow.
ဒန်မြို့ Savage က (fakedansavage)
ဒန်အမျိုးသည်လူကြိုက်များသောသည်သူ၏လိင်ကိုအကြံဉာဏ်ကော်လံ Savage ကချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏ podc​​ast ကို Savage က Lovecast ကြောင့်လူသိများသည့်စာရေးဆရာနှင့်လှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်, သူအစဉ်အလာနဲ့ non-ရိုးရာဆက်ဆံရေးကပြဿနာတွေကိုဆြေးြေိံးထားသည်အဘယ်အရပ်. အချို့ကိုသင်ပြောပေးပါဟင်လေရီရှာလျှင်သူ၏ Twitter feed ကိုထွက်မှာ Check, risque သေးလင်းလင်းချိန်းတွေ့အကြံဥာဏ်.
Erin စာရေးသားအကြံဥာဏ်တက်ကမ်းလှမ်းပေမယ့်လည်းချိန်းတွေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို features ကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရေဒီယိုပြပွဲများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံမသာသူတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါသည်. သူမ၏အကြောင်းအရာအသစ်များတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအပေါ်ပထမဦးဆုံးနမ်းအကြံပေးချက်များမှချိန်းတွေ့အထိ. ဗွီဒီယိုလင့်ခ်များအတွက် Twitter ပေါ်မှာသူမ၏ Follow, ဆောင်းပါးနှင့်ချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များ.
အန်တိုနီယို Borrello (eDatingDr)
အန်တိုနီယိုဆက်ဆံရေးဟာဒွိဟကိုမဆိုလူအပေါင်းတို့နှင့်မျိုးများအတွက်အကြံဥာဏ်နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကမ်းလှမ်းသူတစ်ဦးစိတ်ပညာရှင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံးဖြစ်ပါတယ်. သူ၏ Twitter အကောင့်ကိုကြည့်လိုက်ပါ, သူမကြာခဏသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆက်ဆံရေးကအကြံပြုချက်တွေနဲ့ quotes နှင့် links တွေကို posts အဖြစ်.
Wilma ဟာ Stordahl (MyDatingRx)
Wilma ဟာကွာရှင်းပြီးနောက်ချိန်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းကိုသူမ၏အကြံဥာဏ်ကိုပူဇော်တဲ့ချိန်းတွေ့ဘလော့ဂါဖြစ်ပါသည်, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများအပေါ်အကြီးအကျယ်ကိုအခြေခံပြီး. သင်ကွာရှင်းပြီးနောက်ချိန်းတွေ့ရေကူးကန်အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုခန့်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားကြလျှင်သူမ၏ Twitter အကောင့်ကိုကြည့်ပါ.